Ahụkarị nri Veracruz, njikọ nke autochthonous na Hispanic | Akụkọ Njem
Ahụkarị nri nke Veracruz nwere ihe dị mkpa isi ngwaahịa mmiri. Ọ bụghị n'efu, mpaghara a dị na Ọwara Oké Osimiri Mexico ma ọ bụghị naanị nwere ọtụtụ kilomita nke ụsọ oké osimiri, mana obodo na-enye aha ya nwekwara ọdụ ụgbọ mmiri kachasị mkpa na mba ahụ.
Veracruz bụkwa obodo mbụ ndị Spain hiwere Mexico. Ya mere, na Akụrụngwa Hispaniki ọ dị nnọọ na gastronomy ya. A na-ejikọta ya na pre-Columbian Mesoamerican ọdịnala na Ihe oriri nke african na caribbean inye ịrị elu nke gastronomy dị ike dịka ọ na-atọ ụtọ n'ihe gbasara ụtọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu banyere ụdị nri nri Veracruz, anyị na-agba gị ume ka ị gụọ akwụkwọ.
1 Ahụkarị nri Veracruz: A bit nke akụkọ ntolite
2 Ahụkarị nri nke Veracruz: Efere ndị kachasị ewu ewu
2.1 Eradị azụ ụdị Veracruz
2.2 Arroz a la tumbada, nri ọzọ nke ụdị nri Veracruz
2.3 Minced ma ọ bụ azụ Onwe Gị, azụ Onwe Gị
2.4 Zacahuil ma ọ bụ Sacahuil
2.5 Nshịkọ chilpachole
2.7 Achịcha dị iche iche
Ahụkarị nri Veracruz: A bit nke akụkọ ntolite
Ihe niile anyị gwara gị gbasara Veracruz gastronomy ka baa ọgaranya, n’aka nke ya, yana ngwaahịa ndị etolitere n’ala steeti ahụ, na-eme nri ma nwee nnukwu mmiri site na mpaghara ebe okpomọkụ na okpuru mmiri o nwere.
Mana ihe mbụ anyị chọrọ ịgwa gị bụ obere akụkọ banyere ụdị nri Veracruz. Ndị Spain wetara ọtụtụ ngwaahịa na nri ha. N'etiti ha, agwa, osikapa, ọka wit na lemon. Ma anụ dị ka nke ezi ma ọ bụ nke nne okuko na ọla di ka ya mmanụ olive na garlic.
Ozugbo e guzobere na ala Veracruz, ndị ọbịa ọhụrụ ahụ malitere ịmịpụta ngwaahịa ndị ọzọ, ụfọdụ amaala ọdịnala na nri tupu Columbian, ebe ndị ọzọ anaghị ewu ewu. Otu n'ime ha bụ ndị ọka, nke kọfị na mkpụrụ osisi dị ka painiapulu, aki oyibo, sapote, mango, guava ma ọ bụ oroma.
Ugbua na narị afọ nke XNUMX, ndị kwabatara ọhụrụ si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa wee jiri ọdịnala mee ka gastronomy nke Veracruz baa ọgaranya. arab, Caribbean ma na-abịa site Mba Europe. Ihe a niile emeela atọ dị iche iche nri n'ime ụdị nke steeti Mexico a. Ka anyị hụ ha.
Nri Creole nke nwere mmetụta African American. Dị ka aha ya na-egosi, ọ na-eme ka ihe oriri, Spanish na Africa. Ọ bụ ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na, n'etiti ngwaahịa ndị ọ na-eji eme ihe, bụ akpu, nke ndị Spain kpọrọ ya ji eme ya n'ihi ụdị ya na tuber Africa a; ọka; shuga ma ọ bụ ngwa nri dị ka ifuru Jamaica na tamarind.
Nri Huasteca. Ọ dabere na ọdịnala nke obodo teenek, emi odude ke edere edere ikpehe Veracruz. Onye n'ezi okwu ya bu oka di iche iche dika ocha, odo odo ma obu uhie. N'etiti ya Ezi ntụziaka bụ zachahuill, a tamale ma ọ bụ mgwakota agwa, kpomkwem mere nke ọka, nke jupụtara na anụ si dị iche iche anụmanụ; ihe ahumachi nke nopales na efere huasteco.
Nri Totonac. Dị ka ọ na-adịkarị n'ebe ugwu, ọ dabere na ọka n'onwe ya, ose na agwa. N'etiti ụdị nri ya dị iche iche atole (ihe ọ drinksụ drinksụ sitere na ọka n'oge oge Hispanic) na tamale.
Ahụkarị nri nke Veracruz: Efere ndị kachasị ewu ewu
Dị ka anyị gwara gị, ụdị nri Veracruz nwere isi ihe dị mkpa azu na azu, ma gụnyekwara ụtọ sauces ejiri ngwaahịa na mpaghara. Anyị ga-egosi gị ụfọdụ nri ndị a.
Eradị azụ ụdị Veracruz
Nri a na-agwakọta ihe abụọ: mkpụrụ nke oké osimiri na nke ala Veracruz. Enwere ike iji azụ ọ bụla nọ na mpaghara ahụ, site na dogfish na cabrilla site na snook, tilapia na basal. Otú ọ dị, ihe kachasị mee bụ Red snapa, mara na mpaghara dị ka Red snapa, azu ezigbo azu azu.
Otú ọ dị, ihe nzuzo nke usoro nri a dị na ihendori, nke, n'ụzọ magburu onwe ya, bụ otu n'ime mmadụ ole na ole emere na Mexico adịghị oko. Ihe ndi ozo bu mmanu oliv, akwukwo akwukwo, nnu na ose, yabasị, tomato, pasili, galik, oregano, oliv na nkpuru ahihia.
Nkwadebe ya dị mfe, n'ihi na, ozugbo etinyere ihendori ahụ, a na-eme ya na azụ dị na oven. Kpamkpam nye ya oseose aka, ọ nwere ike tinye cuaresmeño chili ma jiri osikapa ọcha ma ọ bụ poteto jee ozi. Obi abụọ adịghị ya, ihe ijuanya na-akpata gastronomic.
Arroz a la tumbada, nri ọzọ nke ụdị nri Veracruz
Arroz a la tumbada, otu n'ime staples na-ahụkarị nri nke Veracruz
Anyị nwere ike ịsị na ọ bụ otu ihe nke paella nri anyị, ọ bụ ezie na ọ nwere ihe dị iche na ya. Ihe ndi ozo, tinye na osikapa, bu ahihia ogwu, akwara, akwara na ihe ndi ozo nke a sofrito eji galik, yabasị, tomato na ose oji. N'ikpeazụ, a na-eme ka ekpomeekpo ya dịkwuo mma na pasili epupụta, oregano, coriander na epazote.
O yiri ka a ghaghị ịchọta nri a na nri nke ndị ọkụ azụ, na narị afọ nke iri na itoolu, rụrụ ọrụ ha n'ụsọ osimiri Veracruz. Na, dị ka ọchịchọ ịmata ihe, anyị ga-agwa gị na a na-akpọ ya «idina ala» iji gosi na ọ kwadebere ofe.
Minced ma ọ bụ azụ Onwe Gị, azụ Onwe Gị
Na-ewu ewu n'etiti etiti mpaghara ahụ, ha abụghị ihe ọzọ ọka tortillas na salsa n’elu wee chọọ chiiz ranchero na yabasị chọọ ya mma. Ha na-enweta aha azụ Onwe Gị, kpomkwem, n'ihi na a na-akụ azụ n'ọnụ nke achicha ahụ ka ihendori ghara ịda.
Ha dị ka sọọsọ Emere ha na mba ndi ozo ma, oburu na ichoro ihe iri nri na Veracruz, anyi kwadoro ha n'ihi na ha di uto. Agbanyeghị, ụmụ amaala mpaghara ahụ na-ewerekarị ha deayuno.
Zacahuil ma ọ bụ Sacahuil
Na-ejuputa maka zacahuil
El Tamale Ọ bụ ihe ama ama, ọ bụghị naanị na Veracruz, kamakwa na Mexico dum. Dị ka ị maara, ọ bụ ọka a sụchara n’akwụkwọ ya. Agbanyeghị, zacahuil bụ nsonaazụ nke nri Huasteca, dị ka anyị gwara gị.
Ọ bụ kpomkwem a ibu tamale, ikekwe nke kachasị ukwuu ị nwere ike ịchọta na mba ahụ dum. Ma o nwere akụkọ ihe mere eme karịa. Akwadebe ọka mgwakota agwa na nhazi a dịka ụmụ amaala mere ọtụtụ narị afọ gara aga. N'ihi ya, ọ na-ebilite n'ọtụtụ a na-akpọ nixtamal nke nwere nkpuru obere ala na ọdịdị ọdịdị gbawara agbawa.
Nke a mgwakota agwa jupụtara mmanu abuba, ata ata na anụ ezi ma ọ bụ toki, n'etiti ihe ndị ọzọ. Nke ikpeazụ bụ nnụnụ buru ibu nke amụrụ na America nke nwere ọdịdị turkey.
A na-ahụkarị nri nke Veracruz ofe dị ezigbo ụtọ ma na-ejuputa. Ọ bụ ikpe nke chilpchole, nke e si nweta nri French ndị sitere na ya. N'ihi na ọ bụghị banyere ihe ọ bụla ọzọ karịa otu ofe efere Ejiri azụ na nshịkọ (ụdị nshịkọ na-acha anụnụ anụnụ si na mpaghara Veracruz).
Agbanyeghị, chilpachole siri ike karịa ofe achicha dị iche iche. Maka ndị na-ebido ebido, enyere ya nkwado ọka mgwakota agwa. Ma, na mgbakwunye, ọ nwere yabasị, chili a mịrị amị, tomato, galik na epazote. Ihe ndia nile n’enye ya udiri yiri atole, ihe ọ aụ drinkụ nke mbido Hispanic nke anyị kwurula, ọ bụ ezie na nke a na-atọ ụtọ ọdịnala.
Mkpa ọkụ bụ Efere okooko osisi Izote. Ndabere ya bụ osisi a dị na Central America ma ọ na-ebukwa oporo, chives, tomato, epazote na ntị pipian. N’aka nke ya, ndị a bụ onyinye eji mkpụrụ osisi ugu mee nke a na-ejikwa maka nri ndị ọzọ.
Banana mogo, nri ọzọ nke ụdị nri Veracruz
N'etiti ụdị nri niile nke Veracruz, nke a nwere ike ịbụ otu n'ime ihe doro anya Mgbọrọgwụ Africa. N'ihi na, na-akpọ machuco, ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ karịa ndu bu plantain puree.
Iji mee ya, a na-eji anụ ahụ ha esi na mmiri esi mmiri. Mgbe mkpuchi ha gbawara, a na-ewepụ ha ma tinye bọta na nnu iji gwerie ha ruo mgbe ha nwere ụdị edozi. Ma efere a adịghị njikere ugbu a. A na-ekwe ka ihe dị ọcha dị jụụ na ngwa nju oyi ka o sie ike ma emikpu. Ọtụtụ mgbe, a ga-arụ ọrụ dị ka akụkụ nke agwa.
Ọ bụrụ na nri ndị anyị kwurula ugbu a dị ụtọ, achịcha dị iche iche nke Veracruz anọghị n’azụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro nri ya niile dabeere na ya ọka na, n'etiti ihe ndị kasị atọ ụtọ na ato uto, anyị ga-ekwu banyere chogostas, ụfọdụ bọọlụ nwere ụrọ oriri na onye sitere na ya tupu oge Hispanic.
Omenala ndi ozo duchesses, ụdị tacos jupụtara na aki oyibo meringue, na ndi masafins, ụfọdụ polvorones kpuchie shuga na pawuda. N'aka nke ya, tetamal Ọ bụ ọka na mgwakota agwa mgwakota agwa na-esi ísì ụtọ na anise ma na-ekpo ọkụ ma kechie ya na akwukwo berijao.
La ugu Ọ bụ protagonist nke ọtụtụ Veracruz na ato uto. Ọ bụ ikpe nke fritt, ọ bụ ezie na, n'ihe banyere ndị a, ndị edetu, nke jupụtara na meringue. N'ikpeazụ, pemoles ha bụ ọka, butter na shuga donuts na marzipan si Veracruz Ihe e ji amata ya bụ ahụekere kama ịmị almọnd.
Anyị agwala gị atole, nke emere na flavors dị iche iche dabere na mkpụrụ osisi eji edozi ya. Ya mere, anyị nwere ike ikwu maka atole banana, ugu, ọka ma ọ bụ coyol (mkpụrụ osisi dịka aki oyibo). Ọ na-iwesa na Veracruz na horchata, ọ bụ ezie na ọ bụghị dị ka Spain. N’ebe ahụ ka ejiri osikapa na cinnamon ma ọ bụ vanilla mee ya.
Typicaldị ndị ọzọ ka bụ ihe ọ drinksụ drinksụ dịka menyul, ejiri mint, na popo. Nke ikpeazụ a ga-atọ ụtọ, dịka o nwere koko, osikapa, cinnamon na mkpụrụ osisi dịka azquiote. N'ikpeazụ, ehi Ọ bụ mmanya na-egbu egbu nke ihe ọ ingredientsụ areụ bụ mmanya na-egbu egbu, mmiri ara ehi na mmanụ a peụ, ọ bụ ezie na a na-ejikwa nri ndị ọzọ dị ka mango.
Ke akpatre, anyị gwara gị banyere ahụkarị nri nke Veracruz. Dịka ị ga-ahụ, ọ gụnyere efere dị iche iche, nke na-atọ ụtọ karịa. Mana Veracruz abụghị naanị na ọ ga-apụta maka gastronomy ya, ọ bara uru ileta, anyị na-agba gị ume inyocha ihe ịga leta Veracruz. Ọ bụrụ na ịnaghị anwa anwa ime ya n'ihi erughị oke nke ọrịa a, lee otu isiokwu gbasara chọrọ iji gaa site na mba ya mere i nwere ike ime ya n’atụghị ụjọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Mexico » Ahụkarị nri nke Veracruz